Jamballa: Mgbasa ozi Blogger maka ụdị | Martech Zone
Mgbasa ozi Blogger nwere ike inye ndi oru ahia nyocha di elu, imata ihe omuma na ezi echiche, site na itinye aka na ndi na-ede blọgụ na ulo oru gi. Jamballa bụ ihe eji ede blọgụ ọhụụ na ụdị jikọrọ ọnụ dabere na njirisi ha kwupụtara. Nke a pụtara na ndị na-ede blọgụ anaghị ewebata nsogbu na ngwaahịa ha na-enweghị mmasị na azụmaahịa jikọtara ya na ndị na-ede blọgụ chọrọ iso ha rụọ ọrụ.
Jamballa na-enyekwa ọrụ ntọhapụ ndị na-aga maka ndị na-ede blọgụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Igodo nke ọrụ ha bụ ihe nyocha ha pụrụ iche na nke na-egosipụta nkewa, nyocha ma chọta ndị na-ede blọgụ ziri ezi - na mgbakwunye na ịkwụ ụgwọ nke nkwalite n'ihu.
Nzacha ahụ na-enye gị ohere ịkọwa uru nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị (etinyere na mmasị ndị na-ede blọgụ), ọnọdụ mpaghara nke ndị na-ede blọgụ, ọnụọgụ ndị debanyere aha na ndị ọbịa pụrụ iche yana ma ha kesara ihe ndị ahụ na mgbasa ozi mmekọrịta. I nwedịrị ike ịkwụsị ọnụ ọgụgụ ndị na-ede blọgụ ịchọrọ ịkpọtụrụ.
Tags: gaa blogger outreachndị na-ede blọgụakwụ ụgwọ mgbasa ozinweta mgbasa ozi mgbasa oziNdị na-emerụ ahụjambala